विदेशमा रहेका नेपालीले कहिलेदेखि पाउँछन् इ-पासपोर्ट ? – List Khabar
Home / Uncategorized / विदेशमा रहेका नेपालीले कहिलेदेखि पाउँछन् इ-पासपोर्ट ?
admin November 24, 2021 Uncategorized Leaveacomment 145 Views
विदेशमा रहेका नेपालीहरुले माघदेखि ई-पासपोर्टको आवेदन दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गरेकाहरुले मात्र नयाँ बिध्युतिय राहदानी पाउने बताइए पनि विदेशमा रहेकाहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएपनि ई-पासपोर्टको लागि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगबाट आवेदन दिन पाउनेछन् ।
विदेशमा रहेकाहरुले आफू सँग रहेको एमआरपी पासपोर्टको म्याद सकिएमा मात्र ई-पासपोर्टको आवेदन दिन सक्छन् अन्यथा एमआरपीले पनि काम गर्छ । साझासवाल बाट
Previous घोर कलियुग : २ सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे, प्रहरीमा पक्राउपछिको बयान सुन्दा दुनियाँ चकित
Next बसले मोटरसाइकललाई ठ क्क र दिँदा माओवादीका केन्द्रीय नेताको निधन